Zimbabwe: President Secures World Bank Support - allAfrica.com
Zimbabwe: President Secures World Bank Support
New York — THE World Bank will support Zimbabwe's economic recovery and international debt clearance efforts, a senior official of the multilateral lender has said.
Yesterday, World Bank vice president for Africa Mr Hafez Ghanem said he was supportive of President Mnangagwa's agenda regarding cooperation with international lenders.
In 2015, Zimbabwe adopted the Lima Plan to clear debt arrears, and President Mnangagwa's Government has revived it as part of a broader strategy to attract fresh lines of credit and foreign direct investment (FDI).
Beyond that, the US sanctions law-- the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act -- has for close to two decades restricted Zimbabwe's access to lines of credit from multilateral lending institutions.
President Mnangagwa's Government has set about normalisation of relations via political and business-based diplomacy, the latest effort of which was yesterday's meeting with Mr Ghanem.
Also present in that meeting were Finance and Economic Development Minister Professor Mthuli Ncube and Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) Governor Dr John Mangudya, who are part of President Mnangagwa's delegation in the United States.
On Monday, President Mnangagwa all but secured the support of Britain - through its Minister of State for Africa Harriet Baldwin - in its quest for backing for the Lima Plan at next month's annual meetings of the IMF and World Bank in Bali, Indonesia.